Ixesha lokusetyenziswa-Uniproma-Xa iChemistry isebenza
Abasebenzisi bale webhusayithi baxhomekeke kwimigaqo yokusetyenziswa kwale webhusayithi. Ukuba awuvumelani nale migaqo ilandelayo, nceda ungasebenzisi iwebhusayithi yethu okanye ukhuphele naluphi na ulwazi.
I-Uniproma inelungelo lokuhlaziya le migaqo kunye nomxholo wale webhusayithi nanini na.
Yonke imixholo yale webhusayithi, kubandakanya ulwazi olusisiseko lwenkampani, ulwazi ngemveliso, imifanekiso, iindaba, njl., Zisebenza kuphela kugqithiso lolwazi lokusetyenziswa kwemveliso, hayi ngenjongo yokhuseleko lomntu.
Umxholo kule webhusayithi yi-uniproma, ukhuselwe yimithetho nemigaqo efanelekileyo. Onke amalungelo, izihloko, imixholo, izibonelelo kunye nokunye okuqulathwe kule webhusayithi kungabanini okanye banelayisensi yi-uniproma
I-Uniproma ayiqinisekisi ukuchaneka okanye ukusetyenziswa kolwazi kule webhusayithi, kwaye ayithembisi nokuyihlaziya nangaliphi na ixesha; Ulwazi oluqulethwe kule webhusayithi luxhomekeke kwimeko yangoku. I-Uniproma ayiqinisekisi ukusetyenziswa kwemixholo yale webhusayithi, ukusebenza kweenjongo ezithile, njl.
Ulwazi oluqulethwe kule webhusayithi lunokuba nokungaqiniseki kwezobuchwephesha okanye iimpazamo zokuchwetheza. Ke ngoko, ulwazi olufanelekileyo okanye umxholo wemveliso kule webhusayithi unokuhlengahlengiswa amaxesha ngamaxesha.
Abasebenzisi bale webhusayithi akufuneki babonelele ngedatha yokuchonga ubuqu. Ngaphandle kokuba bafuna iimveliso eziqulathwe kule webhusayithi, banokusithumela ulwazi olufakelweyo xa uthumela i-imeyile, ezinje ngesihloko semfuno, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, umbuzo okanye olunye ulwazi. Asizukubonelela ngedatha yakho yobuqu kuye nawuphi na umntu wesithathu ngaphandle kwaxa kufunwa ngumthetho.